Dhibaatooyinka hurdada ee Android ayaa sii socda: RAM iyo cilado SMS | Androidsis
Dhibaatooyinka hurdiga ah ee Android ayaa sii socda: RAM iyo dhiqlaha SMS
Cristina Torres sawir-haye | | Noticias, Noocyada Android
Waxay u muuqataa taas Dhibaatooyinka hurdada ee Android sii wad. Waxa aad awooday inaad ku aragto fiidiyowgii hore waa kii ugu dambeeyay ee kuwa soo ifbaxay maalmahan. Xaaladdan oo kale waxaan ogaaneynaa in aaladaha qaar ay dhibaato kala kulmaan Google Now Launcher iyo aaladaha ay ku shaqeeyaan, iyo in kiiskan ay ka tegeyso qalabka iyadoo aan wax jawaab ah laga helin. Laakiin tani waxay horey u ahayd kii ugu dambeeyay ee dhowr ah oo jilaayay maalinta. Waxaan kuu sheegaynaa waxa ay yihiin warbixinnadii ugu dambeeyay ee adeegsadayaasha leh Android Lollipop ay dhaafeen taasna waxay ku saabsan tahay RAM iyo cayayaanka qaarkood markay helaan sms.
Sida muuqata, qaar ka mid ah khaladaadkan ma lahaan doonaan xal adag, Google-na durba way ka shaqeyneysaa arinta. Si kastaba ha noqotee, qaar kama muuqdaan dhammaan aaladaha, oo kaliya noocyada Nexus ee casriga ah ayaa u muuqda inay ku xanuunsanayaan iyaga. In kasta oo tan iyo inta ay tahay inaan sugno Android 5.0 inay diyaar u ahaato taleefannada kale, haddana mar dambe ayaan arki doonnaa sida dhibaatooyinka isku midka ah ugu dhacaan iyaga. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaan ku falanqeyneynaa wax yar oo faahfaahsan waxa cayayaanka keenaya Lollipop Android on qalabka la xiriira RAM iyo soo dhaweynta SMS iyo dirista.
1 Maamulka RAM
2 SMS bug
In ka badan cayayaanka laftiisa, waa inuu ahaadaa qalad qaabeynta guud ee Lollipop. Xaqiiqdii, tijaabooyinka lagu sameeyay Nexus 9, waxaad ku aragtaa isbeddel weyn oo u dhexeeya hawlgalka Kit Kat iyo kan ah muunad ku saabsan nacnaca. In kasta oo ilaa noocii hore caqligu raacay nidaamka qalliinka uu ahaa in la ilaaliyo sida ugu macquulsan dhammaan barnaamijyada uu isticmaalehu furay furmay, haddana qaabka shaqada ayaa la beddelay, OS-na waxaa loo sheegay in waxa ay tahay inaad sameyso oo dhan ay dhow yihiin iyaga, iyadoo aan loo eegin haddii uu jiro RAM la heli karo iyo in kale. Taasi waa, haddii wixii macquul ka hor ahaa ay ahayd oo kaliya in la xiro kiisaska uusan terminalku haysan RAM ku filan oo uu shaqada ku sii wado, hadda sidaas ayuu sameeyaa sida caadiga ah.
Imtixaanadii lagu qaaday fagaareyaal kala duwan, waxaan ku ogaanay in Nexus 9, oo leh meel bilaash ah oo ah 876 MB, iyo adeegsiga 554 MB ee nidaamka iyo 406 MB codsiyada, xir barnaamijyada iyo barnaamijyada iyadoon loo baahnayn. Xaqiiqdii taasi, xaqiiqda ah inay jiraan xusuus badan oo bilaash ah oo loo maleynayo in aan la isticmaalin ayaa ah waxa keenay in loo maleeyo inay tahay bug, in kasta oo qaabeynta ay u badashay Google ujeedkeeda si loo hubiyo in xirnaanshaha ballaaran aysan sameynin dhacdo markaad marinayso barnaamijyada qaarkood.
Khaladka ku saabsan dirista SMS-ka xilligan wuxuu kaliya saameynayaa hawlwadeenada qaarkood, iyo taleefannada Nexus 4, Nexus 5, iyo Nexus 6. Cayayaanka ayaa ah in xitaa in kasta oo ay awoodaan inay helaan farriimaha qoraalka sida caadiga ah, dadka isticmaala awood uma laha inay u dir. Ama si fudud looma dirin, ama koodh khalad ah ayaa u muuqda mid u dhigma 38. Lama oga waxa dhici kara, ama haddii ay jiri doonaan hawl wadeenno ka badan kuwa reer Yurub iyo Hindida oo caddeeyay inay la il-daran yihiin dhibaatadan warbixinnada macaamiisha. Dabcan, xilligan la joogo kiiska Spain, waxay umuuqataa inaysan jirin kiisas xalna durba waa la raadinayaa maadaama sidan oo kale taleefannadu lumin doonaan midkood shaqeynaya sababtoo ah hurdiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Dhibaatooyinka hurdiga ah ee Android ayaa sii socda: RAM iyo dhiqlaha SMS